घर / भान्साको नल / भाँडो फिलर किचेन faucets / WOWOW पॉट फिलर नल ब्रश निकेलमा स्टोभ ओभर
WWOW पॉट फिलर नल ब्रश निकेलमा ओभर स्टोभ
रेटेड 5.005बाहिर आधारित 25 मूल्यांकन ग्राहक
(25 ग्राहक समीक्षा)
यसको सामग्रीको सजीलो सफा गर्ने क्षमताले बर्तन भराव भान्साको ट्यापलाई स्वच्छता प्रयोगको लागि उपयुक्त बनाउँदछ।
स्टेनलेस स्टील सामग्रीले बनेको, भाँडो फिलर किचनको नल रस्ट प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी छ।
डबल जोडिएको भाँडो फिलर राम्रोसँग वेल्डेड हुन्छ, त्यसकारण, क्र्याक गर्न वा आकार बाहिर गर्न सजिलो हुँदैन।
उत्पादन पकड गर्न धेरै प्रयास बिना प्रयोग गर्न सजिलो छ।
2311100 स्थापना निर्देशन
तपाइँको भान्सामा क्लासिक टच यो सुन्दर रट्र्याटेबल वाल-माउन्ट पट फिलर २2311100१११० जोड्नुहोस् जसमा एक शानदार मूर्तिकला सिल्हूट समावेश छ।
विशाल कुचिन माउन्टका लागि आदर्श यो कुकुर पूरक तपाईंको आफ्नै कुकरमा सजिलैसँग तपाईंको कुकिंग बर्तनहरू भर्नको लागि बिना सिन्कोबाट स्टोभटपमा लैजानु आवश्यक पर्दछ।
हार्डवेयर सुविधाहरू: हस्ताक्षर हार्डवेयरको सीमित जीवनकाल ग्यारेन्टी अन्तर्गत कभर गरिएको।
डबल शट अफले उपभोक्तालाई या त भित्ताहरू वा टाउकोमा पानी बन्द गर्न सक्षम गर्दछ, त्यसैले प्रयोगको चरणमा पानीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेर।
काँसाको भेला गरिएको नल शरीर रस्ट प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो र उच्च तापमानको प्रतिरोध गर्न एक उत्कृष्ट विकल्प हो।
एकल प्वाल पर्खाल माउन्ट गरिएको सेटअप डुअल स्विंग जोन्टहरूले पट फिलरलाई अनुमति छैन जब प्रयोग भइरहेको छैन।
निर्दिष्टीकरणहरू: उचाई: -9 -१ / २ ″ (नलको धेरै माथि तल्लो तिर)।
फुटबल उचाई: २- / / ″ sp (आउटलेट आउटलेट गर्न भित्ता सकेटको बीच)।
फ्लो स्पीड: १.1.8 गैलन प्रति मिनेट नल।
SKU: १2311100००।। विभाग: भान्साको नल, भाँडो फिलर किचेन faucets टैग: ब्रश निकल, भाँडो फिलर, पर्खाल चढाइयो
पटा फिलर नल फोल्डिंग डबल ह्यान्डल ब्रश निकेल
वाणिज्यिक सिंक नल / शास्त्रीय / २ ह्यान्डल
एच *** एल2020-06-14
मैले त्यहाँ धेरै पैसा खर्च गरेको छु। यो एक ठूलो मूल्य थियो, मसँग यसलाई व्यावसायिक स्थापना भएको थियो तर प्लम्बर सहमत भए कि यो एक सुपर मूल्य र राम्रो गुण हो।
हामीले यी टबका लागि खरिद गर्‍यौं, किनकि हामीसँग मिक्सिंगको लागि मानक स्पेसिंगको सट्टा भित्ताबाट छुट्टै पाइपहरू आएका थिए।
सबै कुरा राम्रोसँग बनेको छ। अचम्मै संचालन गर्दछ। भारी निर्माण। कडा र राम्रो डिजाइन। तिनीहरू सधैंभरि रहोस्!
जी *** s2020-06-27
क्लिन लुक र डबल भल्भ प्रणालीले बन्द गरेपछि ड्रिप्स त्याग्न राम्रो गर्छ। यस भाँडो फिलरको साथ समस्या यो छ कि हातहरू पोष्ट वर्गको वर्ग होइनन् त्यसैले यस्तो देखिन्छ कि यसले थोरै सारिरहेको छ। अद्यावधिक: कम्पनीले मेरो समीक्षा देख्यो र त्यहाँ पुगे र भन्यो कि मैले एउटा दोषपूर्ण उत्पादन प्राप्त गरें र मलाई नयाँ प्रश्न पठायो तर कुनै प्रश्न गरेन। तिनीहरू ठीक थिए, नयाँ एकदम राम्रो देखिन्छ। उत्तम ग्राहक सेवा
अद्भुत म यस भाँडो फिलरको बारेमा पर्याप्त कुरा गर्न सक्दिन। मेरो घर भ्रमण गर्ने सबैलाई मनपर्दछ। ग्राहक सेवा राम्रो थियो म राम्रो सेवा प्रतिनिधि को लागी सोध्न सक्दिन।
एल *** डी2020-07-01
डिजाईन मन पराउनुहोस्। कडा महसुस हुन्छ। म डेल्टाबाट एउटा खरीद गर्न जाँदै थिएँ यस तरिकाको होम डिपोमा तर लगभग 400०० डलर खर्च भयो, त्यसैले समीक्षा पढेपछि मैले यसको निर्णय गरे। म खुशी छु कि मैले यो पाएँ, तर तस्वीरहरू पछि पोस्ट गर्नेछन् WOWOW स्थापना पछि। धेरै आधुनिक रूप र यो कस्तो लाग्छ प्रेम।
पी *** ई2020-07-11
यस भाँडो फिलरसँग धेरै सन्तुष्ट मेरो प्लम्बरले यसलाई स्थापित गर्‍यो र यो राम्रोसँग काम गर्दछ। मलाई यो देखिन्छ कि तरीका मन पर्छ र मूल्य धेरै उचित थियो। विक्रेता धेरै समायोजित र उत्पादन को बारे मा मेरो प्रश्नहरु लाई उत्तरदायी छ।
एक *** ई2020-07-15
मलाई यो प्याट फिलर मनपर्छ। मैले सोच्न सकिनँ कती कती सुविधाजनक हुन्छ। पानी सजिलै बग्दछ र कहिले पनि नछोड्छ। मसँग मेरो चुलोको छेउमा पनि मेरो कफीको भाँडो छ र हातले भण्डार भर्नको लागि पूर्ण रूपमा पुग्छ।
मैले मेरो काउन्टरटपको लागि प्वाल गरीएको खरिद खरिद गर्नुपर्‍यो र यसलाई प्राप्त गर्नको लागि काउन्टर संशोधन अन्तर्गत केहि अन्य कार्यहरू गर्नुपर्‍यो। एक पटक अब यो उत्तम छ! ह्यान्डल सहजपूर्वक स्थिति छैन। एक दुबै ह्यान्डलको अन / अफ पोजिसनको बारेमा सोच्नुपर्दछ यसलाई दुबैमा दायाँ र बन्द गर्नका लागि। यो बाहेक यो पैसाको सौन्दर्य हो।
यो भाँडो फिलर महँगो थिएन, र यो राम्रो देखिन्छ र राम्रो काम गर्दछ। यो म्याट कालो फिनिश हो। यसले फ्रन्ट बर्नरसम्म सम्पूर्ण तरिका फैलाउँछ। यो सजिलैसँग सार्दछ र स्थापना गर्न सजिलो थियो। योसँग राम्रो पानी प्रवाह छ।
D *** ई2020-07-25
ठूलो मूल्य, अपेक्षित रूपमा काम गर्दछ। समाप्त राम्रो, सभ्य गुणवत्ता देखिन्छ। मानौं स्वतन्त्र नेतृत्व। काश यो डुअल ह्याण्डलको रूपमा आयो तर सबै भन्दा बढि मैले सिफारिस गर्दछु।
यो हाम्रो भान्छाको लागि एक ठूलो थप हो। काम गरिरहेको ठेकेदारले यो धेरै मन परायो उसले एक स्थापित गर्न जाँदै छ। सब ठिक! सबैले सोचे कि यो एकदम राम्रो थियो।
गुणवत्ता र सजिलो स्थापना संग धेरै प्रभावित थियो। मेरो व्यवसायिक भान्सा को लागी महान। कहिँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्।
हामीले भर्खरै हाम्रो भान्साकोठा पुन: निर्माण गर्‍यौं र यो सुन्दर पोट फिलर थप्यौं। राम्रोसँग निर्माण गरियो र सजीलो माथि गयो!
यस नललाई माया गर्नुहोस्। महान काम गर्दछ! तातो स्टोभ खोल्नको लागि खोल्नको लागि डबल अन / अफ ह्यान्डलले ठूलो काम गर्दछ।
एल *** आर2020-08-15
हामीले हाम्रो बाथरूममा यो नल प्रयोग गर्‍यौं। स्थापना सजिलो थियो र यो राम्रो देखिन्छ!
यो नल एकदम राम्रो छ र तपाईं मूल्य हराउन सक्नुहुन्न! मलाई चिन्ता थियो कि यो सानो हुनेछ तर यो राम्रोसँग बनेको छ।
अर्को दिन उत्पादन प्राप्त भएपछि, मैले मेरो भाँडो नलको स्थापना सुरु गरें। PTFE थ्रेड टेपको मात्रा पर्याप्त छ। पहिलो पटक म धेरै ट्यापको कारण स्थापना गर्न असफल भयो, बाँकी PTFE थ्रेड टेप मेरो दोस्रो स्थापनाको लागि अझै पर्याप्त थियो। स्थापना पूरा भएपछि, मैले धेरै परीक्षणहरू गरें, र पानी चुहावट भएन!
ढुवानी छिटो थियो, र मैले खरीदको तेस्रो दिनमा उत्पादन प्राप्त गरें। मेरो भर्खरै नवनिर्मित भान्सा कुण्डमा तुरुन्तै एक नल स्थापना गर्नु पर्छ। नल बिना एउटा भान्छाको घर राम्रोसँग काम गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम छ। मलाई भित्तामा भाँडो नल स्थापना गर्न आवश्यक छ। उच्च-गुणवत्ताको PTFE थ्रेड सील टेप स्थापना कार्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विक्रेता द्वारा प्रदान उच्च गुणवत्ता PTFE थ्रेड सील टेप को लागी धन्यवाद। रकम धेरै ठूलो छ र यो मेरो लागि २- times पटक प्रयोग गर्न पर्याप्त छ।
एल *** एल2020-09-02
यो भाँडो फिलर नलले मेरो भान्साको काम अधिक कुशल बनाउँछ। विगतमा, नलको मुनि पानी लिन वा अरू भाँडाकुँडाको माथि भाँडोमा पानी हाल्नको लागि मैले सधैं ठूलो भाँडो बोक्नु पर्थ्यो। यो धेरै कष्टकर र बोरि .्ग चीज हो। हाम्रो नयाँ भान्छाको नविकरण गर्दा, मैले सफलतापूर्वक मेरो श्रीमान्‌लाई भाँडाको नल स्थापना गर्न मनाउन थालें। पाइपर पट्ट फिलर नल हाम्रो प्रयासहरू मध्ये एक थियो र हामी यस नलबाट धेरै सन्तुष्ट भयौं। यो मुख्यतया पीतलबाट बनेको हुन्छ, र सतह मैट कालो इलेक्ट्रोप्लेट प्लेट हो, जुन धेरै शास्त्रीय र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ। यो भान्छामा स्थापित भएपछि, यो हाम्रो भान्छाको तारा बन्नेछ। हामीले स्थापना गर्न पेशेवर प्लम्बरहरू भाडामा लिइसकेका छौं, सबै चीज सजीलो हिसाबले गयो, र वाह वाह भाँडो फिलर नलले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, मलाई यो मनपर्दछ!
उत्पादनमा आएको बक्सले कुनै धातुको ब्रश बिना धातुको छाप बिना यसलाई पठाउन अनुमति दियो। भित्तामा स्थापना भएको अंश उठ्नको लागि पर्याप्त सजिलो थियो किनकि हामी नयाँ निर्माणबाट तारा .्गा गर्दै थियौं। अवस्थित भित्तामा राख्नको लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्न। उत्पादन कपलर स्थापना गर्न एलन रिन्चको साथ आयो। यो वाउडलले अविश्वसनीय भएको छ यदि तिनीहरूले वाउडलले थोरै टेफ्लन टेप पनि समावेश गरेको भए पनि कुनै उपकरण बक्समा प्लम्बिंगको साथ काम गरिसकेको छ। म्यानुअल अनुसरण गर्न को लागी पर्याप्त सजिलो छ। इन्टरनेटमा हेर्नुहोस् कि पर्खाल कति टाढा छ तपाईंले नल स्थापना गर्नु पर्छ जस्तो तपाईं चाहनुहुन्छ बर्तनहरू भर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ तर एकै साथ आफ्नो माइक्रोवेभलाई तपाईंको दायरा माथि नछोड्नुहोस्।
आर *** टी2020-09-19
हामीले भर्खरै भाँडाको फिलर स्थापना गरेका छौं, सबैजना शpt्कास्पद थिए र पूर्वानुमान गर्छु कि मैले यसलाई कुनै पनि हिसाबले प्रयोग गर्ने छैन। तिनीहरू गलत छन्! तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा यो भाँडो फिलरले तपाईंलाई भारी भाँडो चुलो चुल्होमा नदिन सहायता गर्दछ। धेरै शेफ वा जो कोही दैनिक खाना पकाउँछ यसलाई मनपर्दछ र यसलाई उपयोगी पाउनुहुनेछ। मलाई डिजाईन र टच मन पर्छ। मलाई मात्र चिन्ता छ जब स्टोभ खुला छ र बर्तन फिलर तातोको शीर्षमा छ, के यसले केही नोक्सान पुर्‍याउँछ? अहिले सम्म मसँग burn बर्नरहरू छन् म बर्तनको प्रयोग नगर्न कोशिश गर्छु जुन पॉट फिलरको माथि छ। सिफारिश गरिएको।
म *** n2020-09-27
सुन्दर, धेरै राम्रा पोट फिलर। मूल्यको लागि उच्च गुणवत्ता देखेको छैन। धेरै सीधा स्थापना। फेरि एक बिना गर्दैन। आइटम एकदम राम्रो प्याक गरिएको थियो, र इकाईमा कुनै मैला ढिलो छैन। कडा र चिल्लो समाप्त उत्तम छ।
एल *** डी2020-09-29
यो भाँडो फिलर राम्रोसँग बनेको छ र मेरो नयाँ भान्छामा एक आश्चर्यजनक थप गर्दछ। मेरो प्लम्बरले सजिलैसँग भाँडो फिलर स्थापना गर्‍यो। यो स्थिर देखिन्छ र यसको प्रयोगको सहजताले मेरो परिवारको लागि वर्षौं आनन्द प्रदान गर्दछ।
सजिलो स्थापना, राम्रो देखिन्छ। ठोस महसुस गर्दछ र नियन्त्रणहरू सहज छन्। यो केवल एक हप्ताको लागि थियो। अहिले सम्म यो मनपर्‍यो।
N *** ई2020-10-07
भर्खरै यो स्थापना भयो।, राम्रो देखिन्छ
WowOW क्रोम किचन सिंक नल पुल आउट संग ...